समाज – Page2– Hamropati.com
Home»समाज (Page 2)
By on January 24, 2018 समाज
काठमाडौं, मंसिर ११ के तपाईंलाई थाहा छ ? नेपालमा पहिलोपटक सवारी (गाडी) कसरी भित्र्याइएको थियो ? यो विषयचाहिँ अलि रोचक र सुन्दा पनि अचम्म लाग्नेखालको छ । इतिहासअनुसार गेहेन्द्र शम्शेरले काँधमा बोकाएर पहिलो गाडी काठमाडौं भित्र्याएका थिए । पछि राणा यसको शौखिन भए । गेहेन्द्र शम्शेरले फोर्ड कम्पनीको गाडी झिकाएका थिए । नेपाल भित्र्याएको त्यो […]
धुर्मुसलाई फेरि पर्यो संकट
By on January 21, 2018 समाज
चन्द्रपुर : सन्तपुरमा धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनका तर्फबाट नमुना बस्ती निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा स्थानीयमा खुसियाली छाएको छ। नयाँ आधुनिक घर पाउने भएपछि स्थानीय हर्षित भए पनि फाउन्डेसनका अभियन्ता हास्य कलाकार सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ तनावमा देखिएका छन्। बस्ती निर्माणका लागि सामान खरिदमा उधारो एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। ‘सोचेजस्तो’ रकम सहयोग नपाइरहेको फाउन्डेसनले जनाएको छ। चाडवाड […]
यि हुन नेपालका अबैध यौन बजार
फलानो होटलमा छापा मारेर प्रहरीले यति जोडीलाई आपत्तिजनक हालतमा पक्राउ गर्योआ भन्ने समाचारहरूमा अब कुनै नवीनता छैन। देशका मुख्य शहर र शहरोन्मुख गाउँहरूमा खुलेआम देहसुखको खरिदबिक्री भइरहेको छ। यौनकर्मीहरूले रेडलाइट एरियाको माग गरेको पनि वर्षौं भइसक्यो। पूर्वका प्रमुख शहर र बजारमा सर्वत्र स्थापना भइरहेका छन्, सेक्स स्टेसनहरू। यस्ता स्टेसनका पारखी छन्,रिक्साचालकदेखि ठूला व्यापारीसम्म। पूर्वको यौन […]
फलफूल तथा तरकारीको उच्च मूल्यले शहरबासी उपभोक्ताको दैनिकीमै असर परिरहेको छ। गाउँमा सस्तोमा पाइने फलफूल र तरकारी बिचौलियको हातमा परेर शहरसम्म आइपुग्दा ४ गुणासम्म महँगिन्छ। शहरमा घर भएकाहरुसँग खाली ठाउँ भनेको कौशी मात्र हुन्छ। पछिल्ला दिनमा केहीले कौशीमै तरकारी फलाउन थालेका छन्। कौशीमा अब तरकारी मात्रै होइन कागती पनि फलाउन सकिन्छ। गमला वा आफैँले कुनै […]
जब नेटमा आफ्नै सेक्स भिडियो देखे !
By on January 19, 2018 समाज
युट्युबमा आफ्नो गीतका माध्यमबाट पहिचान बनाएकी गायिका क्रिसी चेम्बर्सले भनेकी छन् कि पूर्व प्रेमीले गोप्य सेक्स भिडियो अनलाइनमा पोष्ट गरिदिएपछि यसको असर जिन्दगीभर परेको छ । उनले भनिन्, ‘यस घटनाले मेरो जिन्दगीभर असर पारेको छ, मलाई लाग्छ आउने समयमा पनि यसले असर गर्नेछ ।’ पूर्व प्रेमीविरुद्ध चार वर्ष कानुनी लडाइँ लडेकी चेम्बर्स युट्युब म्युजिसियनबाट ‘रिवेन्ज […]
नेपालमै पहिलो समलिंगी विवाह
By on January 19, 2018 शिक्षा, समाज
समलिंगी विवाहको कानुन निर्माण भइरहेका बेला डडेल्धुरा जिल्लामा एक समलिंगी जोडीले विहे दर्ता गराएका छन्। जिल्लाको भित्रीमधेशका रुपमा चिनिने परशुराम नगरपालिकामा समलिंगी विहे दर्ता भएको हो। स्थानीय रमेश नाथले वैशाख २४ गते समाजिक परम्परा अनुसार कैलालीको लम्किीचुहा नगरपालिका १ की मोनिका शाहीसंग विवाह गरेका थिए। उनीहरुले परशुराम नगरपालिका पुगरे विहे दर्ता गराएका हुन्। समलिंगी विहे […]
हात्तीबाट इलामको बुकुवाका बासिन्दा त्रसित
By on January 19, 2018 प्रमुख समाचार, समाज
दमक, माघ ५ । इलामको दक्षिणी चुलाचुली गाउँपालिकाको केही वडामा एक सातादेखि जंगली हात्तीले उपद्रो मच्चाउँदै आएपछि गाँउले त्रसित बनेका छन् । जंगली हात्तीले चुलाचुलीस्थित बुकुवाका घर भत्काउने साथै अन्नबाली नष्ट गरी दिएपछि त्यस क्षेत्रका वडावासी त्रसित भएका हुन् । चुलाचुलीका– वडा नं ४, ५ र १ का १० घर हात्तीले भत्काएपछि हात्ती पीडित विचल्लीमा […]
काठमाण्डौकी धनी केटीको अनौठो फेसबुक धन्दा !
By on January 19, 2018 अपराध, समाज
बेरोजगारसंग संगै युवायुवतीहरु विभिन्न अपराधमा लाग्ने गरेका छन् । सबै भन्दा छिटो पैसा कमाउने बाटो बनेको छ ठगि धन्दा । काठमाडौंकी एक युवतीको ठगी धन्दा देखेर प्रहरी नै आश्चर्यमा परेको छ । बिदेशी गिरोहसँग मिलेर नेपालमा दर्जनौंलाई ठगी गर्ने युवती अन्ततः प्रहरीको फन्दामा परेकी छिन ।उनी हुन्, सोलुखुम्बु घर भई काठमाडौंको बौद्ध बस्ने ३३ बर्षीय […]
के–के काम गर्न जनता प्रदेश राजधानी जानुपर्छ ?
By on January 19, 2018 पत्रपत्रिका, प्रमुख समाचार, राजनीति, समाज
काठमाडौं, माघ ५ । जनप्रतिनिधि मात्र राजधानी जाने हुन्, जनताका सरकारी काम स्थानीय तहमै हुने खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ । १. जन्म, मृत्युदर्ता र नाता प्रमाणित स्थानीय तहमै जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ, नाता प्रमाणितलगायत सबै प्रकारका सिफारिस र सेवा वडा कार्यालयबाटै प्राप्त हुन्छन् । नागरिकता र राहदानी लिन मात्र अहिलेजस्तै जिल्ला सदरमुकाम जानुपर्नेछ । […]
नवराज सिलवाललाई भगाउन प्रहरीबाटै गोप्य सूचना
By on January 19, 2018 अपराध, पत्रपत्रिका, प्रमुख समाचार, राजनीति, समाज
काठमाडौं, माघ ५ । पूर्वडीआईजी नवराज सिलवाललाई ‘भगाउन’ प्रहरीले छानबिनका गोप्य सूचना उपलब्ध गराएको खुलेको छ । एमालेको टिकटमा ललितपुर १ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित पूर्वडीआईजी सिलवालमाथि सरकारी कागजात किर्तेमा छानबिन भइरहेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । छानबिनका क्रममा प्रहरीबाटै सूचना लिक गरिँदा सिलवाल काठमाडौं छाड्न सफल भएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ । […]